समाचार - हरेक चोटि ब्रेक डिस्कहरू परिवर्तन गर्न कति किलोमिटरहरू छन्?
हरेक चोटि ब्रेक डिस्कहरू परिवर्तन गर्न कति किलोमिटर?
यो भनिन्छ कि ब्रेक प्याडहरू कति पटक यसलाई परिवर्तन गर्ने तय गरिएको छैन। यो ड्राइभि conditions्ग अवस्था र ड्राइभिंग बानीमा निर्भर गर्दछ। यी बानीहरूले ब्रेक प्याडको प्रयोगलाई असर गर्दछ। यदि तपाई यसलाई राम्रोसँग मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले पाउनुहुनेछ कि धेरै जसो ब्रेकमा कुनै कदम चाल्नु पर्दैन। यदि फिल्म राम्रोसँग प्रयोग गरीयो भने यो १०,००,००० किलोमिटरसम्म पुग्न सक्दछ।
त्यसो भए कुन अवस्थाहरूमा ब्रेक प्याडहरू प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक पर्दछ, तपाईं निम्न नियमित निरीक्षणहरूको माध्यमबाट जान सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूलाई शर्तहरू पूरा गरेमा तिनीहरूलाई तुरून्त बदल्न सक्नुहुन्छ।
१. ब्रेक प्याडको मोटाई जाँच गर्नुहोस्
ब्रेक प्याड पातलो छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। तपाईं निरीक्षण गर्न र निरीक्षण गर्न एक सानो फ्ल्यासलाइट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जब निरीक्षणले पत्ता लगाउँदछ कि ब्रेक प्याडको कालो घर्षण सामग्री टाढा लाग्न लागेको छ, र मोटाई mm मिमी भन्दा कम छ, तपाइँले यसलाई बदल्नु पर्ने बिचार गर्नुपर्छ।
२. ब्रेकि ofको आवाज
यदि तपाईं दैनिक ड्राइभिंगको बेला ब्रेकमा कठोर धातुको सुनुवाइ सुन्नुहुन्छ भने, तपाईंले यस समयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यो ब्रेक प्याड मा अलार्म फलाम ब्रेक डिस्क लगाउन शुरू भएको छ, त्यसैले यो तेज धातु ध्वनि।
Bra. ब्रेकि force फोर्स
सडकमा ड्राईभ गर्दै र ब्रेकमा स्टेप गर्दा, यदि तपाईंलाई धेरै कडा लाग्छ भने, सँधै नरम भावना हुन्छ। पहिलेको ब्रेकि effect प्रभाव प्राप्त गर्न ब्रेकलाई गहिरो रूपमा थिच्नु आवश्यक हुन्छ। जब आपतकालीन ब्रेक प्रयोग गरिन्छ, प्याडल स्थिति स्पष्ट कम हुनेछ। यो हुन सक्छ कि ब्रेक प्याडले मूल रूपले घर्षण गुमाएको छ र यस समयमा प्रतिस्थापित हुनुपर्दछ, अन्यथा गम्भीर दुर्घटना हुनेछ।
ब्रेक डिस्क परिवर्तन गर्न कति किलोमिटर?
सामान्यतया, ब्रेक डिस्क प्रत्येक ,000०,०००-70०,००० किलोमिटरमा परिवर्तन हुन्छ, तर निर्दिष्ट अझै पनि मालिकको प्रयोग आदत र वातावरणमा निर्भर गर्दछ। किनभने सबैको ड्राइभ गर्ने बानी फरक हुन्छ, ब्रेक डिस्क र ब्रेक प्याड फरक फरक हुन्छ। वास्तवमा ब्रेक डिस्क र ब्रेक प्याड एक महत्त्वपूर्ण काम हो जुन ड्राइभ गर्नु अघि जाँच गर्नुपर्दछ। केहि S एस पसलहरू वास्तवमै धेरै जिम्मेवार हुन्छन् र ब्रेक डिस्कहरू बदल्न आवश्यक छ भन्ने कुरा सम्झाउन सक्छ।
जब ब्रेक प्याड धेरै पटक बदलियो, ब्रेक डिस्कको लगाव बढ्नेछ। यस समयमा, ब्रेक डिस्कहरू बदल्नु पर्छ। ब्रेक डिस्कहरू एक शिफ्टमा दुई वा तीन ब्रेक प्याडहरू प्रतिस्थापन गरिए पछि बदल्नु पर्छ। त्यसकारण ब्रेक प्याडहरू बदल्दा ब्रेक डिस्कहरू पनि समयमै जाँच गरिनुपर्दछ, र तिनीहरूलाई गम्भीर रूपमा लगाइन्छ भने प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ।
ब्रेक डिस्कको सामान्य पोशाक बाहेक, ब्रेक प्याड वा ब्रेक डिस्कको गुणस्तर र सामान्य अपरेशनको बखत विदेशी वस्तुको गठनको कारणले लगाएको पोशाक पनि छ। यदि ब्रेक हब विदेशी वस्तुले लगाएको छ भने, गहिरो खाल्ड वा डिस्क सतह लगाउने त्रुटि (कहिलेकाँही पातलो वा बाक्लो) यो वकालत गरिएको छ कि लगाउने र फाल्ने फरकको कारण प्रतिस्थापनले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो ड्राइभिंग सुरक्षालाई असर गर्दछ।
ब्रेक डिस्कहरूको मर्मतसम्भारमा ध्यान दिनका लागि बुँदाहरू: किनकि ब्रेक डिस्कहरूले ब्रेक गर्ने क्रममा धेरै तातो उत्पादन गर्दछ, कार ब्रेक गरेपछि तुरून्त कार न धुनुहोस्। चिसो पानीसँग सम्पर्कको कारण उच्च तापक्रम ब्रेक डिस्कलाई सूजनबाट रोक्न ब्रेक डिस्कहरूको सतह तापक्रम कम गर्न तपाईंले ब्रेक बन्द गर्नुपर्नेछ। चिसो संकोचनले विरूपण र दरारहरू उत्पादन गर्दछ। थप रूपमा, ब्रेक डिस्कको जीवन बढाउने उत्तम तरिका भनेको राम्रो ड्राइविंग बानी कायम गर्नु र अचानक स्टपहरू त्याग्न प्रयास गर्नु हो।